महाबैले के गरिरहेको छ ? (अडियो सहित) – Online Jagaran
महाबैले के गरिरहेको छ ? (अडियो सहित)
२३ माघ २०७५, बुधबार ०६:३२ February 6, 2019 जागरण
कालिकोट, २३ माघ (जागरण) । जागरणले नियमीत रुपमा स्थानिय सरकारका गतिविधिहरुलाई प्रकाशन र प्रशारण गर्ने गरेको छ । स्थानिय सरकार जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकार हो । नजिकको सरकारले गरेका काम नागरिकका लागि चासोको विषयवस्तु हो । स्थानिय विकासका लागि राम्रो काममा प्रोत्साहन र नराम्रो कामलाई खवरदारी जो कोही पनि गर्नैपर्छ ।
स्थानीय सरकार अन्तर्गत आज हामीले कालिकोटको महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर सिंहसँग कुराकानी गरेका छौ । उहाँलाई हामीले सबै भन्दा पहिला यो आर्थिक वर्षमा भौतिक विकासका योजना मध्ये कुन कुन योजना सम्पन्न भए ? भनेर सोधेका छौँ ।
३ असार २०७६, मंगलवार १९:४८ June 18, 2019 जागरण